Cheap CNC atụgharị carbon ígwè factory na suppliers | Ouzhan
The-atụgharị akụkụ machining center dị nnọọ mma maka nhazi workpiece iche dị ka curved akụkụ na curved tooling ngwaọrụ. Curved akụkụ na n'ọtụtụ ebe, na ulo oru ubi, dị ka tobaim pupụtara, ụgbọ mmiri propellers, ulo oru ngwaahịa na cylindrical conical ebupụta, na na. N'ozuzu, a na-edozi ihu igwe ahụ site na ntụgharị.
Carbon nchara bu iron-carbon alloy nke nwere carbon nke 0.0218% rue 2.11%. A na-akpọkwa ya carbon steel. Ohaneze, ọ na-enwe obere silicon, manganese, sọlfọ, na site. N'ozuzu, ihe dị elu nke carbon carbon, nke ka ukwuu na-esikwu ike ma nwekwuo ike, ma ọ bụ obere plasticity. Carbon ígwè CNC mbịne na ọtụtụ-eji na adabara kasị n'ibu akụkụ. Ouzhan ga-eji aka ya hazie akụrụngwa dị ka ihe osise na ihe ndị ị chọrọ.
Steel CNC agbanye-nkenke Carbon Steel agbanye Parts machining Center
Uru nke Ouzhan Carbon Steel Turned Parts
- Ọnụ ala, dị mfe iji gbazee
- Ezi nhazi teknụzụ
- Meziwanye arụmọrụ (C%, ọgwụgwọ okpomọkụ)
- Ntughari ngwa ngwa, nnyefe ọsọ ọsọ
OEM ahaziri carbon ígwè mbịne ọrụ-China Shanghai CNC carbon ígwè mbịne akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, ọ nwere ike hazie carbon ígwè na mụ na a pụrụ ịdabere na elu-nkenke CNC mbịne akụkụ. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke carbon ígwè mbịne igwe akụkụ. Ke adianade do, CNC mbịne carbon nchara ngwaahịa nyere erube nnọọ eru ogo ụkpụrụ na ike ga-eji dị iche iche ulo oru ngwa. Na anyị nwere ike inye asọmpi carbon ígwè CNC mbịne ngwaahịa anyị kpọrọ ahịa.
Ouzhan carbon ígwè mbịne akụkụ machining akụkụ uru
(1) Agbanwu adabara maka nhazi dị iche iche esịtidem na mpụga adiana na-ebupụta. Usoro ntụgharị uche nke ịtụgharị bụ IT13 ～ IT6, na ike adịghị mma Ra uru bụ 12.5 ～ 1.6.
(2) Ihe ntụgharị na-enwe ihe owuwu dị mfe na nrụpụta dị mfe, nke dị mma maka nhọrọ ezi uche dị na ngwongwo ngwongwo na akuku geometric dịka nhazi chọrọ. Ọ dịkwa mma karịa ịkọ ma gbakọta ma wepu ngwaọrụ ntụgharị.
(3) Agbanye nwere ike ime mgbanwe na Ọdịdị, ihe onwunwe, mmepụta ogbe, wdg nke workpiece, na na ọtụtụ-eji. Na mgbakwunye ịtụgharị ụdị nchara niile, ihe nkedo, na ọla na-enweghị ike, o nwekwara ike gbanwee ọla na-abụghị ọla edo dịka fiberglass, bakelite, naịlọn na ihe ndị ọzọ. N'ihi na ụfọdụ ndị na-abụghị ferrous ọla ndị na-adịghị adabara egweri, diamond ịtụgharị ngwaọrụ nwere ike ji mee ihe maka ezi mbịne, nke nwere ike inweta elu nhazi ziri ezi na obere elu ike ike ụkpụrụ.
(4) Ewezuga akụkụ adịghị elu nke oghere ahụ, ọtụtụ ntụgharị bụ mbibi na-aga n'ihu yana akụkụ obe pere mpe. Ya mere, ikike ịkpụkpụ na-agbanwe obere, usoro nchacha ahụ bụ nke kwụsiri ike, nke na-enyere aka belata oke ọsọ na ike dị ike, ma nwee arụmọrụ dị elu.
Uru nke Ouzhan carbon steel na-atụgharị ọrụ
- All nkenke CNC mbịne carbon nchara ngwaahịa na-n'okpuru nlezianya mma nnyocha.
- OEM awara awara ọrụ nwere ike ijide n'aka na ị nwetara ngwaahịa ndị achọrọ, kwado DDP, CIF, FOB na ụzọ njem ndị ọzọ iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịnata ngwongwo ahụ n'enweghị nsogbu.
-Dị ka eserese ma ọ bụ n'omume rụpụta nkenke carbon ígwè mbịne akụkụ.
Nke gara aga: Ngwaahia n'ibu ọla mbịne akụkụ nhazi ngwa
Osote: China emeputa CNC omenala carbon ígwè milled akụkụ